नेपालको बारेमा धावा बोल्ने सरिता गिरीलाई चप्पलले गालामा हा’न्दै फु’टाले एक युवाले टिभी (भिडियोसहित) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालको बारेमा धावा बोल्ने सरिता गिरीलाई चप्पलले गालामा हा’न्दै फु’टाले एक युवाले टिभी (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ – सरिता गिरीले राष्ट्रहित विपरित दिएको अभिब्यक्तिले अहिले सर्वसाधारणमा आ’क्रोश बढेको छ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमी पनि समावेश गरेपछि जसपाकी सांसद सरिता गिरीले नक्सा जारी गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने अभिब्यक्ति संसदमा दिएकी थिइन् ।सो अभिब्यक्तिको अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भइरहेको छ । सर्वसाधारणमा यति धेरै आ’क्रोश छ की त्यसको उदाहरण तल दिएको भिडियोको लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
पत्रकार ऋषी धमलासंग अन्तरवार्तामा बसेकी सरिता गिरीको अभिब्यक्ति सहन नसकेर एक युवाले आफ्नो टिभी नै फु’टाएका छन् । पत्रकार धमलाले गरेको प्रश्नमा हो हो मिलाइरहेका उनले सरिताको अभिब्यक्ति प्रति निकै आ’क्रोश ब्यक्त गरेका देखिन्छन् ।
यसै क्रममा पत्रकार धमलाले नेपालले आफ्नो भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने ? भन्दै सरितालाई प्रश्न गर्छन । लिम्पियाधुरा त नेपालको भूमी हो नी ? उनको प्रश्न थियो ।
त्यसको जवाफमा सरिताले लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भनेर तपाईले भनेर हुन्छ ? त्यसको प्रमाण चाहिदैन ? म मान्दिन लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा । सरिता गिरीको यो जवाफ सुनेपछि टिभी हेरीरहेका ति युवाले आफ्नो रिस थाम्न सक्दैनन् । हातमा उठाएको चप्पलले हा’न्छन् । त्यती हुँदा पनि टिभी फु’ट्दैन अनि अलि पर पुगेर अर्को बस्तुले टिभीमा हान्छन् । उनले गरेको प्रहारले टिभी झ’राम झुरुम हुन्छ ।
यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । ति युवा को हुन् ? कहाँका हुुन् भन्ने कुरा भने यो भिडियोवाट खुल्दैन । सरिता गिरीको अभिब्यक्तिको अहिले निकै आलोचना भइरहेको छ । केही युवाहरु वुधवार राति उनको घर अगाडी कालो झण्डा लिएर बिरोधमा पनि पुगेका थिए । उनीहरुले सरितालाई भारत फर्कन भन्दै नारावाजी समेत गरेका थिए ।